I-03 / 12 / 2019 | RayHaber
Usuku: 3 Disemba 2019
Ultekmeköy Sultanbeyli Metro Route izindlu amaxabiso Ceiling
Iplani esekwe kubuchwephesha bokwakha izindlu, i-Indiaxa.com, ukwakha kwakhona kwaye icwangcisiwe ukuba ivulwe kwikota yokugqibela ye2022 Çekmeköy anc Sancaktepe - I-Sultanbeyli Metro Line ibhengeze amaxabiso okuthengisa kwiindawo ezingqonge ummandla. UVeysel Karani, [More ...]
I-TCDD kaMasipala waseSamsun TCDD'ye isilumkiso: 'Ukuhamba kwezithuthi esixekweni kuvaliwe' Umasipala waseSamsun Metropolitan, uSamsun - Sivas Railway Railway District [More ...]
Ukugqitha kwiUlukışla Boğazköprü Umgca weTender Result iTurkey State Railways 2. ICandelo loMlawuli weNkonzo yokuThengwa kweMimandla (i-TCDD) inexabiso le-2019 / 553589 GCC enexabiso le-6.188.786,01 TL kunye nexabiso eliqikelelweyo le-9.089.938,50 TL. [More ...]
I-Kayseri Derevenk Bridge, eyayenziwe ngu-Freysaş isebenzisa indlela elungelelanisiweyo yeconsole, yafakwa kwinkonzo yomngcwabo wokuvula owawubanjwe ngu-Mongameli u-Recep Tayyip Erdoğan kunye nabathunywa abahamba nabo. Umhla wokuvula i31 [More ...]
Amasebe eOrdu ahlola izithuthi zikaRhulumente
Umkhosi weMetropolitan kaMasipala iSebe lamaPolisa kaMasipala iSebe lamaTrafiki kunye neCandelo lezoKhuseleko namaqela eSebe lezoThutho loLuntu ziimoto zeS-plate kunye nezithuthi zikawonkewonke ziye zaphicothwa. 19 [More ...]
I-Ofisi yeCaravan yeselfowni ikwiNkonzo ye-Kartepeliler
Umasipala waseKocaeli Metropolitan iSebe lezoThutho kunye noLawulo lweeTrafiki, iOfisi yeOfisi yefowuni yaqala ukukhawulelana neemfuno ezandayo kwicandelo lamakhadi okuhamba kwisithili saseKartepe. ICaravan 10 yefowuni eselwayo [More ...]
Metropolitan Municipality Jikelele iCandelo loMlawuli intsebenziswano EGO kunye Union zooMasipala ka Turkey Station Metro ANKARAY nokucoca zokusebenza nabasebenzi okokuqala "kwezoPhuhliso loMntu Buqu" semina sinikwe. Ukuphuculwa kwecandelo lenkonzo ye-EGO [More ...]
Iindaba ze-Ankara ezimbi ..! Iintlawulo zokupaka nge1 Lira UkuCinywa
Iindaba ezimbi ze-Ankara ..! Iintlawulo zokupaka nge1 Lira Ukucinywa; UMasipala weNqila ye-Ankara, iiphawundi ze-1, ezazirhoxisiwe yiNkundla yoLawulo yeSithili ibhengeza imali yokupaka. Imirhumo yokupaka kaMasipala eA Ankara [More ...]
IMetro Istanbul ilungiselela isiCwangciso seNtlekele ngoKulindeleka komhlaba kwi-Istanbul
IMetro Istanbul ilungiselela isiCwangciso seNtlekele ngoKulindeleka komhlaba kwi-Istanbul; I-İGDAŞ, ebonelela ngeenkonzo zokuhambisa igesi yendalo kubasebenzisi abazizigidi ze-6,5 kuyo yonke i-Istanbul, ngenxa yenkqubo yayo yokulumkisa kwangoko, ifake zonke iivarhasi zegesi yendalo ngaphambi kwenyikima ye-5-10 imizuzwana. [More ...]
Izmir Ngaphandle Kwezithintelo Zisayine Omnye uMgaqo
I-İzmir Ngaphandle kweZithintelo Ityikitywe enye iMigaqo; Ilungu lebhunga elikhubazekileyo u-Ahmet Uğur Baran 3 ubambele njengommeli we-İzmir Usodolophu we-Metropolitan Tunç Soyer nge-Disemba yeHlabathi yoBantu abaKhubazekileyo. Baran, le sicelo Turkey [More ...]
I-CHP Tekirdag Icandelo likaSekela-Aygun Wengozi yoThutho ziziphumo zokungakhathalelwa
Ukucwangciswa kwePalamente kunye neKhomishini yoHlahlo-lwabiwo mali yoMphathiswa Wezothutho kunye neZiseko zophuhliso ze-2020 kwi-CHP Tekirdag uSekela Gqr. İlhami Özcan Aygun, Ukukhumbula i-Çorlu yoLoliwe kunye neengozi zeSantya se-Ankara, [More ...]
Abatyalomali bafuna i-Mersin Metro esuka e-Abroad
IMersin, enobunzima bokufumana imali mboleko kwiibhanki zikarhulumente ezinxulumene notyalo-mali lwenkqubo kaloliwe, yaya phesheya. Usodolophu kaMasipala wase-Mersin Metropolitan u-Vahap Seecer uthe, ım Sikhangela iikhredithi ezivela phesheya. Sifuna ukunika imali kunye nokwakhiwa kweshishini kwenye indawo ” [More ...]